အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းအရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ - Cele Platform
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းအရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမိုက်​စားမင်းသမီး​ချော​လေး ပတ်​ထရစ်​ရှာက​တော့ International ဆန်​တဲ့ မျက်​နှာကျ​လေးကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူ​လေးဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေလည်း အရုပ်မလေးလို ချစ်ဖို့ကောင်းသူပါ။ အမြဲလိုလို သူမရဲ့အလှပုံရိပ်​​လေး​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးလေ့ရှိတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ လတ်တလောမှာလည်း အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို အရမ်းဂေါ်နေတဲ့ သူမရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ သူမနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ ဆံပင်အရောင်လေးနဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပွဲတက်လာတဲ့ ရှာရှာလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် လန်းနေတာပါနော်။
မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်လာသူတွေကို လည်ပြန်ငေးယူစေခဲ့ရတဲ့ ရှာရှာလေးရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ “Ayy new hurrr who dis??? Congratulations Not Copyrighted The show was lit 💣🔥⚡️” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။ သွယ်လျလျ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း Gym ပုံမှန် ကစားဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်လွန်းတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်း အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပါ။ မင်းသမီး​ချော​လေး ပတ်ထရစ်ရှာက​တော့ ​လတ်​တ​လောမှာ ရုပ်​ရှင်​​တွေလည်း ဆက်​တိုက်​ရိုက်​ကူးဖြစ်​​နေပြီး တစ်ခြားသော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း လုပ်ဖြစ်နေတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း ရင်ခုန်သံမြန်သွားစေနိုင်တဲ့ အလှကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာလေးကိုချစ်​ရင်​ share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။Momolay
ညှို့အားပွငျးလှနျးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အမိုကျစားမငျးသမီးခြောလေး ပတျထရဈရှာကတော့ International ဆနျတဲ့ မကျြနှာကလြေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးဖွဈပွီး တဈခါတဈလလေညျး အရုပျမလေးလို ခဈြဖို့ကောငျးသူပါ။ အမွဲလိုလို သူမရဲ့အလှပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးလရှေိ့တဲ့ ပတျထရဈရှာကတော့ လတျတလောမှာလညျး အရုပျလေးတဈရုပျလို အရမျးဂျေါနတေဲ့ သူမရဲ့ပှဲတကျပုံရိပျတှကေို ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ သူမနဲ့ လိုကျဖကျလှနျးတဲ့ ဆံပငျအရောငျလေးနဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျတို့ကို ပေါငျးစပျပွီး ပှဲတကျလာတဲ့ ရှာရှာလေးရဲ့ပုံရိပျတှကေတော့ ရုတျတရကျကွညျ့ရငျ မမှတျမိနိုငျလောကျအောငျ လနျးနတောပါနျော။
မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အရမျးလနျးတဲ့ ဖကျရှငျနဲ့ ပှဲတကျလာသူတှကေို လညျပွနျငေးယူစခေဲ့ရတဲ့ ရှာရှာလေးရဲ့ပှဲတကျပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ပတျထရဈရှာကတော့ “Ayy new hurrr who dis??? Congratulations Not Copyrighted The show was lit 💣🔥⚡️” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ခပျမိုကျမိုကျပုံရိပျလေးတှကေို ဝမြှေပေးထားတာပါ။ သှယျလလြ ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပတျထရဈရှာကတော့ အလှအပနဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး Gym ပုံမှနျ ကစားဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ထူးခြှနျလှနျးတဲ့ ပတျထရဈရှာကတော့ ရုပျရှငျကားတှမှောလညျး အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးခွငျးကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာပါ။ မငျးသမီးခြောလေး ပတျထရဈရှာကတော့ လတျတလောမှာ ရုပျရှငျတှလေညျး ဆကျတိုကျရိုကျကူးဖွဈနပွေီး တဈခွားသော အနုပညာလှုပျရှားမှုတှလေညျး လုပျဖွဈနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး ရငျခုနျသံမွနျသှားစနေိုငျတဲ့ အလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပတျထရဈရှာလေးကိုခဈြရငျ share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ဂျပန်တွေ ပိုစတာထောင်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရတဲ့ ဦးကျော်ဒင်ဆိုတာ…..